Rita, Writing for My Sake!: ဓါတ်ပုံများနှင့် စကားပြောခြင်း
နဖူးပိုကျယ်လာတယ်။ ကျောင်းတုန်းကလို ဆံပင်တိုတိုကပ်ကပ်ထားတုန်းပေမယ့် အရင်ကထက် ပါးသွားတယ် (ထင်တယ်)။ ကိုကို ဆံပင်ရော ဖြူနေပြီလား။
ကိုကိုဟာ အပြင်မှာမသိတဲ့လူအဖို့ ဓါတ်ပုံထဲကနေ ဖြူသလား ညိုသလား၊ နုသလား ရင့်သလား၊ ပိန်သလား ပြည့်သလား၊ မြင့်သလား နိမ့်သလား ခွဲခြားဖို့ခက်တဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့။ ရှုထောင့်နဲ့ အလင်းအမှောင်အမျိုးမျိုးမှာ တစ်နေရာတစ်မျိုးစီ ဖြစ်နေတတ်လို့။ သိခဲ့ဖူးတဲ့လူတောင် ဘာတွေပြောင်းလဲသွားသလဲ မှန်မှန်ကန်ကန် မခန့်မှန်းနိုင်ဘူး။
တချို့ပုံတွေကြည့်ပြီး ကိုကို အသက်ကြီးသွားပြီ၊ လူကြီးဖြစ်သွားပြီ လို့ တွေးမိပေမယ့် တောလမ်းနံဘေးက သစ်ပင်ရှေ့မှာ ရပ်နေတဲ့ပုံဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ 17 နှစ် စတွေ့ကြတုန်းကထက်တောင် ဘာမှ ပိုမကြီးသေးဘူးလို့ ထင်ရပြန်တယ်။ အထူးသဖြင့် ပြုံးရယ်နေတဲ့ ပုံတွေပေါ့။ သေချာတာတော့ အရင်ကလို မျက်နှာပြည့်ပြည့်မဟုတ်တော့ဘူး။ အလုပ်ပင်ပန်းလို့ ဖြစ်မယ်။ ကိုကို ရယ်နေတဲ့ပုံတွေကို မြင်ရတာ ဟိုးအရင် စတွေ့တုန်းကအချိန်တွေကို သတိရမိတယ်။
ကိုကို့ကို မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ မဟုတ်ဘဲ တခါမှ မမြင်ခဲ့ဖူးဘူး။ ကျောင်းတုန်းကတည်းကလည်း မြန်မာလိုကလွဲလို့ တခြားဘာမှ မဝတ်ဘူး၊ ကိုယ် မှတ်မိတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ခု မြန်မာဝတ်စုံနဲ့မဟုတ်တဲ့ပုံတွေချည်းပဲတွေ့တော့လည်း ဟိုးအရင်ကတည်းက မြင်နေကျလိုပဲ။ ကိုကို ခုထိ jean ကို ကိုယ်ပေါ်မတင်ချင်ဘူး လုပ်တုန်းလား။ holiday သွားတဲ့ပုံတွေမှာကိုပဲ jean pants လေးတောင်မှ မတွေ့မိဘူး။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကြည့်ရတဲ့ ပုံတွေထဲမှာပဲ မပါတာလား။ တချိန်လုံး ကိုကို့ကို သံယောင်လိုက်ပြီး၊ တလေသံတည်းလိုက်ထွက်ဖို့ ဝန်မလေးတဲ့၊ ကိုကို့နောက်လိုက်သာ လုပ်လာခဲ့ဖူးတဲ့ ကိုယ်ကတော့ ခုချိန်မှာ jean ကလွဲလို့ ဘာမှတောင် ကိုယ်ပေါ်မတင်ချင်တော့ဘူးလို့ သိရင် အံ့သြမလား။ အံ့သြမယ် မထင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကို ကိုကို သိပြီးသားပဲ။
အရွက်တွေမရှိတဲ့ သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှာ ထိုင်နေတဲ့ပုံလည်း ငယ်ရုပ်မပျောက်သေးဘူး။ ခြောက်သွေ့အေးစက်မယ် ထင်ရတဲ့ နောက်ခံပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အဲဒီသစ်ပင်ရှေ့မှာ ကိုကို တစ်ယောက်တည်း ထိုင်နေတာတွေ့ရတော့...
ကိုယ် ဘာဆက်ပြောရမလဲ ကိုကို။
သူတပါးကို သနားကြင်နာသလို ခံစားမိတဲ့အခါတိုင်း ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ လိပ်ပြာမလုံသလို ခံစားရတတ်တယ်။ ဒီလိုပြောရင် ကိုကိုကတော့ သဘာဝမကျတဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ ခံစားမှုတွေလို့ ပြောဦးမယ်။ ခုဆို ကိုယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါ စစ်ကြည့်ချင်မိဦးမယ်။
ကိုယ်ကတော့ သူများကို သနားပါတယ်နော်လို့ ပြောရမှာ အပေါ်စီးဆန်သလိုလို ကိုယ့်ဘာသာ ဘဝင်မြင့်သလိုလို ပုံစံမျိုးလို့ ထင်လို့၊ ပြီးတော့ ကိုယ်သနားကြင်နာတာကို ခံလိုက်ရတဲ့ လူရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို ထိပါးသလိုထင်လို့ ပြောထွက်ဖို့ အင်မတိ အင်မတန် ဝန်လေးတာပဲ။
ဒီလောက်ပြောရင် ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ကိုကို သိမယ်မဟုတ်လား။ ကိုယ်က ဘယ်နေရာမှာမှ ကိုကို့ထက် ပိုသာနေလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုကို့အတွက် ဘယ်နေရာမှာမှ ကွက်လပ် မရှိစေချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့်ပါပဲ။
ကွင်းပြင်ထဲမှာ ကိုကို့နောက်ကျောဘက်ကို အဝေးက လှမ်းမြင်ရတဲ့ပုံကို အကြာကြီးကြည့်ရင်း အဲဒီကျောဘက်မှာ တကယ်ပဲ ရပ်နေရသလို ထင်လာမိတယ်။ အဲလိုအနေအထားမျိုးနဲ့ တခါ ကြည့်နေခဲ့ဖူးတယ်။ အဲသည်လောက်ကျယ်တဲ့ ကွင်းပြင်ထဲမှာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ အဲသည်လို အေးစက်ခြောက်သွေ့တဲ့ လေကြမ်းတိုက်တဲ့ နေရာမျိုးလည်း မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ပုံထဲမှာတော့ ကိုကို့ ကုတ်အင်္ကျီရှည်ရဲ့ အနားတွေတောင် လွင့်ပါးလို့နေတယ်။
ဟိုးတုန်းကအချိန်တွေကို ပြန်စဉ်းစားမိရင် အဲဒီတုန်းက သိကျွမ်းရင်းနှီးခဲ့ကြတဲ့ အစုအဖွဲ့ကလေး တချိန်မှာ တယောက်တနေရာစီ ဝေးလံလွင့်ပါးပြီး ပြတ်တောက်ကုန်ကြမယ် မထင်ခဲ့ရဘူး။ လူတွေဟာ အနာဂတ်မှာ ဘာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကြိုသိခွင့်မရလို့သာ ပစ္စုပ္ပန်မှာ နေသာထိုင်သာရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်မှာပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အတွက်တော့ ဘာမှ ဖဲ့ထုတ်လို့မရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေချည်းပါပဲ။ အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန် ပြန်စခွင့်ရလည်း အဲဒီ အပိုင်းအခြားကာလကို အဲဒီအတိုင်းသာ တသွေမတိမ်း လက်ခံရမှာပါ။
ကိုကိုပြောဖူးသလိုပဲ ကိုယ်ဟာ တသက်လုံး လေ့ကျင့်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အလေ့အထတွေကို တစ်ရက် တစ်မနက်မှာတင် စွန့်လိုက်ဖို့ ဝန်မလေးတဲ့သူ၊ ခုတခဏမှ တွေ့ထိသိမြင်တဲ့ အလေ့အထတချို့ကိုလည်း ချက်ချင်း လေ့ကျက်သိုမှီးပြီးသားလိုဖြစ်အောင် အညှာလွယ်တဲ့သူ။ ထသွားပြီးရင် ပြန်မကြည့်ချင်တဲ့သူ။ ကိုယ် အမှတ်ရမယ့် အဖြေလွှာက ကိုယ့်လက်ရေးကိုတောင် နောက်တခါ ပြန်မစစ်ဆေးချင်တဲ့သူ။ ဒီလိုလူမျိုးဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်တော့မှ အရင်းအတိုင်း မမြင်နိုင်စွမ်းဘူးနေမှာပေါ့။ လေယူရာတိမ်းပြီး ယိမ်းချင်တတ်တဲ့သူသာ ဖြစ်မှာပေါ့။
လူတွေရဲ့ အထင်အမြင်တွေဟာလည်း inertia တွေ သိပ်များတယ်နော် ကိုကို။ သူတို့ရှေ့မှာ တလျှောက်လုံးက လေနှင်ရာလွင့်ခဲ့ဖူးရင် ဘယ်တော့မှ အတည်တကျ အမြစ်တွယ်ခွင့် မပေးချင်ကြတော့ဘူး။ ကိုယ်ကတော့ လေတိုက်ထဲမှာပဲ အမြစ်တွယ်နေခဲ့တော့တယ်။ ကိုကိုကတော့ စောဒကမတက်ဖို့သာ ပြောမှာပဲ ထင်ပါရဲ့။ စောဒကတက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုကို့ကို တိုင်တည်ချင်ရုံပါပဲ။
ကိုကို့ နေပုံထိုင်ပုံ ဝတ်ပုံစားပုံတွေ ဘယ်လိုပြောင်းလည်း ကိုယ့်အတွက်တော့ မြင်သားတကျရှိနေတာပါပဲ။ အပေါ်ယံတွေ ပြောင်းသွားပေမယ့် မပြောင်းတာတွေ ရှိနေသေးတာကိုး။ အဲသည်မျက်လုံးတွေ၊ အဲသည်အပြုံးတွေနဲ့ အဲသည်အကြည့်တွေပေါ့။ ဟိုတုန်းကတည်းကလို မပြောင်းလဲသေးတဲ့၊ ကိုယ်တိုင်ရော သူတပါးကိုပါ ကျေနပ် စိတ်ချ နှစ်လို ယုံကြည်စိတ်ကို ကူးစက်စေမြဲ ကိုကို့ မူပိုင်အရာတွေပေါ့။ ဘယ်လိုအရာမျိုးကမှ ပြောင်းလဲပစ်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့ ခိုင်မြဲတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေပေါ့။ အဲဒါတွေကြောင့် ကြားကာလအချိန်တွေဟာ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ခြားနားမနေနိုင်တာ။ ဘယ်လိုစိတ်နဲ့မှ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာ ဘဝပေးအခြေအနေရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ ပြောပါရစေဦး။ စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း မှန်ရာကိုပြောဖို့ ချင့်ချိန်နေရတဲ့အဖြစ်မျိုး ကိုကိုနဲ့ကျမှ ကြုံနေရတာလည်း ဒီဘဝမှာတော့ မရှောင်လွဲနိုင်တော့တဲ့ အဖြစ်ပါပဲ။
ကြည့်မိသမျှပုံတွေထဲမှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ တစ်ယောက်တည်းပဲ။ ဘေးနားမှာ ဘာဖြစ်လို့ တစ်ယောက်ယောက် မရှိသေးတာလဲ။ ဘာဖြစ်လို့ တစ်ယောက်တည်း နေနေသေးတာလဲ။ mid-30s ဆိုတဲ့ အသက်အရွယ်ဟာ ဘဝမှာ အစစအရာရာ ပြည့်စုံအောင်မြင်ပြီးသား၊ အခြေတကျ ရပ်တည်နိုင်ပြီးသား ယောက်ျားတစ်ယောက်အဖို့ တစ်ယောက်တည်း မလုံလောက်နိုင်စကောင်းတဲ့ အချိန်အခါမဟုတ်လား။ ဒီလောက် အပြောင်းအလဲမြန်ပြီး၊ အေးစက် သက်မဲ့တဲ့ လောကကြီးမှာ နွေးထွေးနှစ်သိမ့်မယ့်၊ ကြင်နာယုယမယ့်၊ မျှဝေခံစားမယ့်သူ မပါဘဲ တစ်ယောက်တည်း မနေပါနဲ့။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုထင်မြင်လည်း ဒီစကားတွေကို ကိုယ် အရှင်းလင်းဆုံးသော စိတ်ထားနဲ့ ပြောတယ်ဆိုတာ ကိုကိုကတော့ ယုံနိုင်မှာပါ။ ကိုကို ယုံမှာကို သေချာသိပေမယ့်၊ ယုံကြည်ပြီးမှ ခါးသက်နေရမှာ စိုးလို့ အဲဒီမှန်သောစကားတွေကို ကိုယ် မဆိုချင်တာပဲ။
ကိုယ်ကတော့ ဒီလိုပါပဲ။ အတိတ်ကလူတွေကို မြင်ရင်၊ သတင်းကြားရရင် အတိတ်ကို မှန်းပြီး လွမ်းမိတယ်။ ကွယ်ရင်မေ့ပြီး တွေ့သေအောင်လွမ်းတယ်လို့ တစ်စုံတစ်ယောက်မကတဲ့ သူတွေက ပြောချင်ပါလိမ့်မယ်။ တခါတရံ၊ အကြောင်းတစုံတရာလေးသာ မဟုတ်ဘဲ အကြိမ်ကြိမ် အဖန်ဖန်ကွယ်ခဲ့ ချန်ခဲ့ရတာတွေကို မသိလိုက် မသိဘာသာ မေ့ထားလို့သာ မရခဲ့ရင် ကိုယ် ဘယ်လိုများနေရမှာပါလိမ့်။ တကယ်တော့ လက်ရှိအချိန်မှာ တည့်တည့်နေနိုင်အောင် အလိုလျောက် ကြိုးစားလိုက်မိတာ ဖြစ်မှာပါ။
စတွေ့ဖြစ်တဲ့ နှစ်အပိုင်းအခြားတွေလောက်က ခြံဝန်းကျယ်တစ်ခုထဲ သစ်ပင်တပင်ကို ပတ်ဝိုင်းထားတဲ့ ခုံတန်းရှေ့ စားပွဲမှာ ကွန်ပါဘူးပေါ်က ထပျံနေသလိုဟန်နဲ့ tweety ရုပ်ကလေးကို ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ဟောင်းရဲ့ နောက်ကျောဖုံးပေါ်မှာ ကိုကို မင်အနက်နဲ့ ကူးဆွဲခဲ့တယ်။ ကိုယ် စာလုပ်ပြီးတဲ့အချိန် ကိုကို စာစစ်နေတုန်း high light နဲ့အရောင်ခြယ်ပြီး 'ကြက်ပျံမကျ' လို့ ပုံအညွှန်းစာတပ်တော့ ကိုကိုက ယူကြည့်ပြီး 'tweety က ကြက် မဟုတ်ပါဘူး။ ဘဲပေါက်ကလေးပါ' တဲ့။ ကိုယ်က 'မဟုတ်ဘူး ကြက်ကလေး' လို့။ tv မှာလာရင် သေချာပြန်ကြည့်ပြီး ရှုံးတဲ့လူ ဒိန်ချဉ်တိုက်ကြေးလို့ ပြောခဲ့ကြတယ်။
တကယ်တော့ အဲဒီကာတွန်းကားလည်း စောင့်မကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအလောင်းအစားကလည်း အမှတ်တမဲ့နဲ့ ပြီးသွားတယ်။ ကြားအချိန်တွေမှာလည်း အဲဒီအကြောင်းအရာဟာ ကိုယ့်စိတ်ထဲ အမှတ်တရ ရှိမနေခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအကောင်လေးဟာလည်း ကြက်လည်းမဟုတ်၊ ဘဲလည်းမဟုတ်တဲ့ ကနေဒီယန်ငှက်ကလေးလို့ နောင်နှစ်တော်တော်ကြာမှ သိတယ်။
ခုတော့ အဲဒီငှက်ကလေးရဲ့ ပုံလေးတွေမြင်ရင် ခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ် အတိတ်ကို ပြန်ရောက်သွားတတ်တယ်။ ကိုယ်ဟာ အဲဒီအချိန်ကအတိတ်ကို ဘယ်စိတ်နဲ့မှ တမ်းတတာမဟုတ်ဘဲ အဲဒီအချိန်ရဲ့ ရှင်းလင်းသန့်စင်နိုင်ကြတဲ့ စိတ်နှလုံးသက်သက်တွေကိုသာ လွမ်းဆွတ်မိတာပါလို့ သူ နားလည်နိုင်အောင် ဘယ်လိုပြောရမလဲ ကိုကို။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ကိုကိုအပါအဝင် အဲဒီအချိန်က သိကျွမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ လူတချို့နဲ့ အတူဆုံဖြစ်ချင်သေးတယ်။ စကားတွေလည်း ပြောချင်သေးတယ်။ ခဏတဖြုတ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ဘယ်နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းတယ်ဆိုတာလည်း သိပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်တောင် အဲဒီဆန္ဒကို တကယ် လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ချင်ရဲ့လားဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ မသေချာပြန်ပါဘူး။ ကိုယ်ဟာ အရင်တုန်းကလိုပါပဲ။ ဘာကိုမှ မပြတ်သားဘူး။ ဒါပေမဲ့ အစွန်းတဘက်မှာ ရပ်တတ်တယ်။
ခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ ကိုယ့်အကြောင်းတွေကတော့ ဘာမှ မမယ်ရလှပါဘူး။ ကိုကို သိပြီးတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မြောက်မယ်လို့ ကိုယ် မျှော်လင့်စီစဉ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်မြောက်မလာဘူး။ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ရင် ရနိုင်ပေမယ့် ဒီတိုင်း ရပ်နေခဲ့မိတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အနေအထား မရနိုင်ရင် မယူဘူးဆိုတဲ့ တယူသန်စိတ်နဲ့ပေါ့။ လောကမှာ တနည်းနည်းနဲ့ ဖြစ်မြောက်နိုင်တယ် ဆိုတိုင်းလည်း ကာယကံရှင်တွေအဖို့ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းတွေနဲ့ ရှေ့မဆက်ဘူးလို့ ချလိုက်ရတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ရှိသေးတာပဲလို့ နားလည်စေလိုက်တဲ့ အဖြစ်ပါပဲ။ ကိုယ့် မချောမွေ့တဲ့ အတွင်းသဘောတွေကို တိုက်စားခံလိုက်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံပါပဲ။
လမ်းဆုံလမ်းခွတွေ ရောက်ခဲ့ရင်တော့ ကိုကို့ဆီက ထင်မြင်ချက်တစ်ခုခုကို ကိုယ်တိုင် မသိလိုက်ဘဲ မှန်းဆကြည့်မိတတ်တယ်။ တလျှောက်လုံး ကိုကို တန်ဖိုးထားပြီး နှစ်မြုပ် ကြိုးစားနေတဲ့ အရာကို ကိုယ်က အပေါ်ယံ ပကာသနကိစ္စလိုသာ သတ်မှတ် ရယူချင်တဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုး ရှိနေတုန်းပဲ။
နာခံလွယ်ခဲ၊ မေ့ပျောက်လွယ်ခဲ၊ မှတ်မိလွယ်ခဲလာပြီး ဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာ အိပ်မက်တွေလည်း မက်ခဲလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ တခါတလေ ထင်ထင်ရှားရှား မက်မိတတ်တဲ့ အိပ်မက်တွေထဲက အဲဒီမြို့ကလေး၊ အဲဒီလမ်းကလေး၊ အဲဒီကောင်းကင်ရဲ့ အရိပ်အယောင် ရနံ့တွေနဲ့ အဲဒီတုန်းက စိတ်နှလုံးကိုပါ ရက်တော်တော်ကြာတဲ့ထိ ပြန်ခံစားလို့ ရနေတတ်တယ်။
အဲဒီအချိန်တွေတုန်းကတော့ မသိနိုင်ခဲ့ကြဘူး။ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကျေးဇူးပြုဖို့ တွေ့ခဲ့ကြတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပေါ့။ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် မေတ္တာစေတနာ မပျက်လည်းဘဲ ဘာကောင်းကျိုးမှ အပြန်အလှန် မပြုနိုင်ကြတော့ဘူး။ ဘာမှ မရည်ရွယ် မလုပ်ကိုင်ပါဘဲ တစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို ထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းသာ ဖြစ်နေခဲ့ရတယ်။
ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။ ဖန်လာတဲ့ အကြောင်းတွေပဲပေါ့။
ခုတော့ ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာ ကိုကို ပြုံးနေတာကို ကြည့်ပြီး ငယ်ငယ်တုန်းကလိုပဲနော် လို့ ပြန်တွေးယူကြည့်နေမိတယ်။ ပြီးတော့ ခွေးကလေးပွေ့လျက်ပုံရယ်၊ ခွေးကလေးချည်းပဲ အနီးကပ်ရိုက်ထားတဲ့ပုံရယ် ကိုယ် သိမ်းထားလိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ ဒီရောက်စတုန်းက ကိုကို့ dob ကို bank acct. password လုပ်ထားခဲ့ဖူးတယ်။
ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် နှစ်ယောက်ကြားမှာ ဆုံ တွေ့ ဖြစ် ပျက် ခဲ့ရသမျှက ရှောင်လွှဲမရအောင် တိုက်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေချည်းပဲ။ ဒီဘဝကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်ပြန်စစ အဲဒီဖြစ်စဉ်တွေအတိုင်းသာ အတိအကျ လက်ခံရမှာပါ။
နောက်ထပ် ရှေ့ဆက်ဖို့ ကျန်သေးတဲ့ အချိန်တွေမှာလည်း အကြောင်းတိုက်ဆိုင် ရှောင်လွှဲလို့မရရင် ခဏလောက် ပြန်ဆုံကြတာပေါ့ ကိုကို။
Posted by Rita at 10/02/2011 12:00:00 AM
Labels: Diary, remembrance
ကိုယ် နှင့် အသံများ
Suchadisaster week!
Xiao Huan in 'Brilliant Legacy'